स्वास्थ्य /जीबन शैली Archives - Online Tamang
सधैं बिहान बीरे नुनपानी पिउदा हुन्छ १३ अदभुत फाइदा:
Posted in स्वास्थ्य /जीबन शैली
सधैं बिहान बीरे नुनपानी पिउदा हुन्छ १३ अदभुत फाइदा: किनकी यसमा पाईन्छ ८० प्रकारका यस्ता खनिज।… आयुर्वेदका अनुसार बीरेनुनलाई आफ्नो आहारसँगै प्रयोग गर्नाले विभिन्न किसीमका रोगहरुबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । यसले मधुमेह , उच्च रक्तचाप , पेटसम्बन्धि समस्याहरुबाट छुट्कारा दिलाउँछ । किनकी यसमा ८० प्रकारको खनिज पदार्थहरु पाईन्छ । विहान बीरेनुनलाई पानीमा मिसाएर खानुभयो भने, तपाईंको स्वास्थ्य निकै नै राम्रो हुन्छ । बीरेनुनयुक्त पानी बनाउने तरिका एक गिलास मन्तातो पानीमा आधा सानो चम्चा बीरेनुनलाई मिसाउनुहोस् । यसलाई राम्ररी चलाई २४ घण्टाको लागि त्यसै छोड्नुहोस् । नुन पुरै रुपमा पानीमा घुलेपछि यस पानीलाई पिउनुहोस् । बीरेनुनयुक्त पानीलाई पिउनाले हुने फाईदाहरु १) पाचनशक्तिमा सुधार ल्याउँछ पेटभित्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड र प्रोटिनलाई पुर्याउने इन्जाईमलाई उत्तेजित बनाउनमा मद्धत गर्दछ । यसबाट पाच
गहन इछ्या सक्ति र प्रेरणाले जीवन सफल बन्छ यी हुन् १०० उत्कृष्ट प्रेरक भनाई जो हरेकलाई सफल बनाउछन (अवस्य पढ्नुहोस् र शेयर गर्नुहोस् )
गहन इछ्या सक्ति र प्रेरणाले जीवन सफल बन्छ यी हुन् १०० उत्कृष्ट प्रेरक भनाई जो हरेकलाई सफल बनाउछन (अवस्य पढ्नुहोस् र शेयर गर्नुहोस् )1) ‘रिस’को उल्टो ‘सरी’ पनि हुन्छ । कहिलेकाही उल्टो बोल्दा नि फाइदा हुन्छ । 2) मेरो एउटा पनि सत्रु छैन, सत्रु देख्यो कि मैले सिध्याइहाल्छु.. … उसलाई साथी बनाएर । 3) शहर र गाउँमा दुई फरक छन । (i). शहरमा घरहरू नजिक नजिक हुन्छन तर मनहरू टाढा टाढा हुन्छन, गाउँमा घरहरू टाढा टाढा हुन्छन तर मनहरू नजिक नजिक हुन्छन । (ii). शहरमा घरहरू पक्का हुन्छन तर सम्बन्ध कच्चा हुन्छन,गाउँमा घरहरू कच्चा हुन्छन तर सम्बन्धहरू पक्का हुन्छन । 4) मानिसहरू तब मात्र तिम्रो हात समाउँछन जब उनीहरूलाई थाहा हुन्छकि तिमी एक्लैपनि अगाडि बढ्न सक्छौ । 5) दुनियामा यौटा पनि समस्या नभएको मान्छे को होला ? -एक जना रैछ तर ऊ आर्यघाटमा जल्दै थियो । 6) क्षमता छ भन्दैमा हुदैन, वर्षौदेखि सूर्यले जलाउन न
गोरो बन्न किन लगाउनु पर्यो महँगो महँगो क्रिम ? घरमै बसी बसी चामलको पानीले ७ दिनमै भन्नुस नसोचेको गोरो (भिडियो)
गोरो बन्न किन लगाउनु पर्यो महँगो महँगो क्रिम ? घरमै बसी बसी चामलको पानीले ७ दिनमै भन्नुस नसोचेको गोरो (भिडियो)गोरो बन्न किन लगाउनु पर्यो महँगो महँगो क्रिम ? घरमै बसी बसी चामलको पानीले ७ दिनमै भन्नुस नसोचेको गोरो (भिडियो) गोरो बन्न किन लगाउनु पर्यो महँगो महँगो क्रिम ? घरमै बसी बसी चामलको पानीले ७ दिनमै भन्नुस नसोचेको गोरो (भिडियो)गोरो बन्न किन लगाउनु पर्यो महँगो महँगो क्रिम ? घरमै बसी बसी चामलको पानीले ७ दिनमै भन्नुस नसोचेको गोरो (भिडियो) गोरो बन्न किन लगाउनु पर्यो महँगो महँगो क्रिम ? घरमै बसी बसी चामलको पानीले ७ दिनमै भन्नुस नसोचेको गोरो (भिडियो)गोरो बन्न किन लगाउनु पर्यो महँगो महँगो क्रिम ? घरमै बसी बसी चामलको पानीले ७ दिनमै भन्नुस नसोचेको गोरो (भिडियो) दुःखीलाई जहिले दुःख अनि सुखीलाई जहिले सुख मात्रै मिल्छ, किन?भगवान शिव र पार्वतीको रोचक कथा‘ दुखी अनि दरीद्रको झुपडीमा जानु
सावधान… नङ टोक्ने मानिसलाई “पारोनाइसिया” नामक रोगको खतरा!!
सावधान… नङ टोक्ने मानिसलाई “पारोनाइसिया” नामक रोगको खतरा!!सावधान… नङ टोक्ने मानिसलाई “पारोनाइसिया” नामक रोगको खतरा!! मानिसको प्राय सबैको एउटा एउटा अधत हुन्छ । कतिपय मानिसको नङ टोक्ने बानी हुन्छ । बालबालिकामा यस्तो बानी देखिनु सामान्य हो । तर, युवायुवती या पाका उमेरका मानिस नै नङ टोकीरहेका हुन्छन् ।नङ टोक्ने बानी खराब हो । त्यसैले अभिभावकहरुले बालबालिकालाई नङ टोक्नु हुँदैन भनेर सिकाउनुपर्छ । नङ टोक्ने बानीले विभिन्न प्रकारका संक्रमण फैलिने डर हुन्छ ।शरीरका विभिन्न अंगजस्तै नङ पनि फोहर र संक्रमण बोक्ने प्रमुख अंग हो । नङ टोक्दा निम्त्याउँन सक्ने समस्याहरुःरक्तस्राबः नङ टोक्दा नङ नजिकैको छाला बारम्बार उक्किरहन्छ। जसले गर्दा रक्तस्राब हुनुका साथै अत्यन्त दुखाइ पनि हुन्छ ।आन्द्रामा जुकाःनङ टोक्दा नङमा भएको फोहर मुख हुँदै आन्द्रामा जाने भएकाले यसको पहिलो असर आन्द्रामा पर्छ । नङमा भएको फोहो
छाती दुख्ने समस्याको प्राकृतिक उपचार यस्तो छ सजिलो काइदा, जानेदेखि ठूलो फाइदा
छाती दुख्ने समस्याको प्राकृतिक उपचार यस्तो छ सजिलो काइदा, जानेदेखि ठूलो फाइदा छाती दुख्ने समस्याको प्राकृतिक उपचार यस्तो छ सजिलो काइदा, जानेदेखि ठूलो फाइदा छाती दुख्ने समस्याबाट नेापलको आधा जनसंख्या पीडित भएको बताइन्छ । छाती दुख्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ, कतै यो हृदयाघात त हैन ? जब कि छाती दुख्ने समस्या हृदयाघातका कारण मात्र नभई अन्य विभिन्न कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ । चिकित्सकलाई आधार मान्ने हो भने हृदयाघात भएमा छातीको देब्रे भागमा बेस्सरी पीडा हुने गर्छ । जब कि अन्य कारणले छाती दुखेमा छातीको दायाँतर्फ अधिक पीडा हुने गर्छ । आवश्यकभन्दा बढी कसरत गर्नु, पेटमा जलन, अपच वा पेट सम्बन्धी अन्य थुप्रै समस्याका कारण पनि छाती दुख्ने गर्छ । छाती दुख्ने समस्या पनि व्यक्तिपिच्छे फरक हुने गर्छ । कसैलाई थोरै समयको लागि छाती बेस्सरी दुख्ने गर्छ भने कसैलाई लामो समयसम्म छाती हल्का दुख्ने गर्छ । हृदय
के योनिमा वीर्य झार्दा महिलाहरु मोटाउन्छन् त ? यस्तो छ वास्तकिता [जानी राख्नुहोस तपाईलाई पनि क
म २८ वर्षकी भएँ । विवाह भएको चार वर्ष भयो । हाम्रो एउटा छोरा छ । यौनसम्पर्क गर्दा श्रीमान्ले जब वीर्य योनिमै झार्नु हुन्छ तब लिङ्ग बाहिर निकाल्दा सबै वीर्य बाहिरै आउँछ, किन होला ? अनि म साह्रै पातली छु । परिवार नियोजन गरेमा वा श्रीमान्ले योनिमा झारेको वीर्य बाहिर नआए मोटाइन्छ रे, के यो सत्य हो ? गर्भनिरोधक उपाय जस्तै कि कन्डम लगाउँदा वीर्य कन्डममै जम्मा हुन्छ र कन्डमसँगै बाहिर निकालिन्छ । नेपालमा सहज उपलब्ध नभए पनि स्पन्ज वा डायफ्रामजस्ता साधनले पनि वीर्यमा भएका शुक्रकीटसमेतलाई महिलाको पाठेघरको मुखभित्र पस्न दिँदैनन् । अन्य गर्भनिरोधको उपाय अपनाउँदा त्यसले वीर्य स्खलनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्दैन । पुरुषले बन्ध्याकरण गर्दा पनि वीर्य स्खलन हुन्छ नै, फरक यत्ति हो कि उक्त वीर्यमा शुक्रकीट हुँदैन । वीर्य बाहिर निस्कने कुरा यसरी वीर्य बाहिर निस्कँदा कतै गर्भ नरहने हो कि भन्ने चिन्ता जो–
मलेसिया, बंगलादेश हुँदै भारतमा फैलियो ज्यानमारा भाइरस, नेपालमा खतरा छ कि छैन ? >>शेयर गरेर सबैलाई सचेत बनाउनु होला
जेठ ८, काठमाडौं । भारतको केरलामा पछिल्लो दुई हप्तामा एक भाईरसको कारण एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने अरु धेरै यसबाट पीडित छन् । निपाह नाम गरेको भाईरसले त्यहाँ मृत्युको जोखिम बढाइरहेको हो । केरलाको तटीय शहर कोझिकोडमा उक्त भाईरसको त्रास फैलिएपछी त्यसको नेपालमा समेत असर पर्छ कि भन्ने आशंका छ । यो भाइरसको खास नाम एनआईभी भयेपनि सबैभन्दा पहिले सन् १९९८ मा मलेसियाको कम्पुङ सुगाई निपाह भन्ने ठाउँमा पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि त्यो भाइरसलाई ‘निपाह’ राखिएको हो । त्यतिबेला सुँगुरको माध्यमबाट यो भाइरस सरेको थियो । तर, त्यसपछि जहाँजहाँ एनआईभीको बारेमा थाहा भयो, यस भाइरस फैलिने माध्यम सुँगुर थिएन । २००४ मा बंगालादेशमा केही व्यक्ति संक्रमित भएका थिए । उनीहरुले खजुरको रुखबाट निस्किने तरल पदार्थ खाएका थिए । यो तरल पदार्थसम्म भाइरस लैजाने चमेराहरु थिए, जसलाई ‘फ्रुट ब्याट’ भनिन्छ । त्यसपछि
प्राय महिलाहरुको तिघ्रामा दिखिने निलो डाम के बोक्सिले टोकेर भन्ने सही हो ? बिज्ञानले यसो भन्छ
कुन संस्कारबाट हामी हुर्केका छौं भनी बुझ्ने हो भने बोक्सी, भूतप्रेतबारे धेरै कुरा थाहा हुन्छ । बाबुबाजे लगायतबाट हामीले धेरै कुरा ग्रहण गरेका हुन्छौं । उहाँहरुबाट हामीले वंशाणु गुण त लिएका हुन्छौ नै, साथसाथै उहाहरुको चिन्तन, विश्वास र सोचाई पनि नजानिदो ढंगले ग्रहण भएको हुन्छ । ती पुराना संस्कारहरु पहिलेभन्दा घटेपनि अस्तित्वमा अझै छन् । बोक्सी, भूत, मसान, लागोभागो लगायतका अन्धविश्वास समाजमा व्याप्त छ । आफूलाई परिआएको अवस्थामा कतिपयले यस्ता विश्वासको सहारा लिन्छन् । बोक्सीकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा धामी पुरुष हुन्छन्, बोक्सीको आरोपमा महिलाहरु पर्छन । सबैभन्दा गरिब, अक्षम, असहाय, श्रीमान नभएको, भए पनि काम गर्न नसक्ने, अधबंैसे आदि महिलालाई बोक्सी लगाउने प्रचलन हुन्छ । बोक्सीको आँखा लागे नराम्रंो हुन्छ भन्ने कुरीति छ । एक त गाउँको मनोविज्ञानले त्यो बोक्सी हो है भनेर बुझ्ने भयो । अर्कोतर्फ उनलाई स
सेक्सपछि ‘भर्जिन’ बन्न यस्तो पनि गर्छन् युवतीहरु (एउटा खोजमुलक रिपोर्ट)यास्मिन (नाम परिवर्तन) निकै भाबुक देखिन्छन् । उनी आफ्नो नङ दाँतले लगातार टोकिरहेकी छिन् अनि लगातार मोबाइन चलाइरहेकी छिन् । ‘म यसलाई धोकाका रुपमा मान्छु र यसकारण निकै दुःखी छु ।’- उनले भनिन । हामी ट्युनिशियाको एक प्राइभेट क्लिनिकको चौथो तलामा छौं । जहाँ महिला रोग विज्ञहरु छन् । गुलाबी रङको वेटिङ रुममा महिलाहरु निकै धैर्यताका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । ट्युनिशियामा जब युवतीको विवाह हुन्छ, तबसम्म उनीहरु भर्जिन भएको विश्वास गरिन्छ । यसैकारण यहाँ भर्जिनिटी फेरि हासिल गर्नका लागि ‘हाईमन’ लगाउने कारोबार निकै फस्टाएको छ । यास्मिनले नक्कली हाइमन लगाएको बताइन् । एक सानो मेडिकल प्रक्रियाबाटै महिलाको गोप्य अंगमा हाइमन जोड्ने गरिन्छ । हाइमन एक प्रकारको झिल्ली जस्तो हुन्छ, त्यसलाई चिकित्सकहरुले जोड्ने गर्छन् । हाइमनलाई पु
-गर्मीले अनुहार कालो भयो ? केही मिनेटमै गोरो बन्न अप्नाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
गर्मीले अनुहार कालो भयो ? केही मिनेटमै गोरो बन्न अप्नाउनुहोस् यी घरेलु उपाय काठमाडौँ । गर्मी सुरु भएपछि तपाई हामीमा छालाको समस्या देखिने गर्दछ। छाला कालो हुने समस्याका कारण धेरैलाई गर्मीमा बाहिर निस्किन डर लाग्ने गर्दछ। आज हामीले तपाईलाई गर्मीका कारण कालो भएको छालालाई गोरो बनाउने घरेलु उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। यी विधि अप्नाउनुभयो भने तपाई ढुक्कले बाहिर निस्किन सक्नुहुनेछ। यस्ता छन् घरेलु विधि १) मह र कागतीको रस बराबर मिलाएर अनुहारमा लगाउने र केही समयपछि सफा पानीले धुनुभयो भने तपाईको अनुहारमा निखारता आउनेछ। २) मुसुरोको दालको पाउडरमा अलिकती दुध मिलाएर उक्त पेस्टलाई अनुहारमा लगाउनुहोस्। सुकेपछि त्यसलाई सफा पानीले धुनु भयो भने पनि तपाईको अनुहारमा चमक देखिनेछ। ३) स्याफ्रोन (केसरी) लाई दुधमा मिलाएर अनुहारमा लगाउदा पनि घामले डढेको छाया सफा हुन्छ र अनुहारमा चमक देखिनेछ। गर्मी
लिंग कसरी उत्तेजित हुन्छ ? यौनसम्पर्क गर्दा मेरो लिंग दर्‍हो (कडा) हुँदैन, किन होला ? अब मैले के गर्नुपर्छ ? (5)
यी ३ राशिका पुरुष संग जिन्दगीमा भुलेर पनि कहिल्यै बिबाह नगर्नुहोस्.. (2)
हप्सिनी केटीको यस्तो देखे पछी केटाहरुले यसरी थुक निल्दै हेर्नुहोस् भिडियो + १८ ले मात्र (2)